Ungayiguqula njani iTV ibe yindawo yomlilo (ividiyo kunye nokusetyenziswa) 🥇 I-Emulator.online ▷ 🥇
Akukho nto injengobuntofontofo obufudumeleyo bomlilo ogqumayo, kodwa ayinguye wonke umntu onokuyonwabela ngokulula. Ngokukodwa ezixekweni, indawo yokubasa umlilo endlwini ayiqhelekanga, kwaye nabo banayo abanalo ixesha okanye ithuba lokulungisa iinkuni. Kwimeko nayiphi na into, kunokwenzeka linganisa ubukho bendawo yomlilo endlwini kwaye wenze indawo "ebonakalayo" yendawo yezulu egqibeleleyo hayi kuphela yokuphumla ebusuku, kodwa nangexesha lesidlo sangokuhlwa nabahlobo okanye nosapho, njengoko ubunokwenza ngeKrisimesi okanye obunye ubusuku busika.
Ndiyakwazi yenza i-TV yakho ibe yindawo yomlilo, simahla, ngeendlela ezininzi ezilula nezisebenzayo, ezikhokelela kwi Bona umlilo oqhekezayo kwinkcazo ephezulu, gcwalisa nge izandi zomlilo ovuthayo.
FUNDA OKANYE: Eyona wallpapers emnandi zasebusika zePC ezinekhephu kunye nomkhenkce
Ndihamba ngeNetflix yakhe
Indlela yokuqala yokujika umabonakude wakho ube yindawo yomlilo kwaye eyona ilula kuzo zonke kukudlala ividiyo yeziko elivuthayo. Oku kunokwenziwa kwiYouTube okanye, kungcono, kwiNetflix. Ukujonga okumangalisayo kwindlela O Ikhaya kwiNetflix, unokufumana ukwenziwa kwevidiyo enye iyure.
Ngokukodwa, ungaqala ezi vidiyo zilandelayo kwi-Netflix:
Indawo yomlilo ekhayeni lakho
Indawo yokubasa umlilo yasekhaya
Indawo yokubasa umlilo yaseCrackling (Birch)
Ndihamba ngeYouTube yakho
KwiYouTube unokufumana yonke into kwaye akukho kunqongophala kweevidiyo ezinde ukubona indawo evuthayo negqumayo kwiTV. Ijelo "Indawo yomlilo ekhayeni lakho" ineenguqulelo ezimfutshane zevidiyo zeNetflix, ngelixa ujonge iCamino okanye "iZiko Lomlilo" kuYouTube unokufumana iividiyo zeeyure ezisi-8 okanye ezingaphezulu koko onokuqala ngqo apha:
Indawo yokubasa umlilo eyi-4K yeeyure ezingama-3
Indawo yokubasa umlilo iiyure ezili-10
Indawo yomlilo weKrisimesi 6 yezimbiwa
Indawo yomlilo yeKrisimesi 8 ore
FUNDA OKANYE: Ungayibukela njani iividiyo zeYouTube kwiTV yakho yasekhaya
Isicelo sokujonga indawo yokubasa umlilo kwi-Smart TV
Kuxhomekeka kuhlobo lwe-Smart TV oyisebenzisayo, ungafaka usetyenziso lwasimahla ngokukhangela igama elithi Indawo yomlilo kwiVenkile yayo yeApp. Phakathi kwezona zinto zibalaseleyo endizifumeneyo, sinokuthi:
Uhlelo lokusebenza lomlilo lwe-iPad okanye i-Apple TV
Indawo yomlilo wasebusika
Umthetho wokuqala kwindawo yomlilo
Indawo yomlilo emangalisayo
Isicelo se-Android TV / iGoogle TV yoMlilo
IBlaze-4K Indawo yoMlilo eyiyo
Indawo yokubasa umlilo ye-HD
Indawo zomlilo ezithandwayo
Uhlelo lokusebenza lomlilo weAmazon Fire
Indawo yomlilo emhlophe
Indawo yokubasa umlilo ye-HD IAP
Uhlelo lokusebenza lomlilo weChromecast
Izixhobo zeChromecast (ezingezizo iGoogle TV), azinazo izicelo zokujonga indawo yomlilo, kwaye ukhetho lokubeka isikhuseli somlilo emlilweni nalo luye lwanyamalala (lwalufumaneka kuGoogle Music). Nangona kunjalo, unokukhangela kwiVenkile yeeapps ezinokuthi ziphose ividiyo yomlilo ovuthayo kwiChromecast ye-smartphone ye-Android (njengeNdawo yoMlilo yeChromecast TV) okanye i-iPhone (njengeZiko loMlilo leChromecast). Ungasasaza nayiphi na ividiyo ye-Youtube usebenzisa i-smartphone okanye ikhompyuter yakho kwiChromecast.
Iinkqubo ezi-6 zokwenza i-bootable flash drive yeWindows, Linux kunye neMacOS
Ungaqonda njani ukuba umntu usiphethe ngemakrofoni (i-PC kunye ne-smartphone)